Ra’iisul wasaare Abiy Axmed oo ka hadlay Xaaladda ka jira Itoobiya ‘Waa dambi weyn dilkii fanaan Hachalu‘ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ra’iisul wasaare Abiy Axmed oo ka hadlay Xaaladda ka jira Itoobiya ‘Waa...
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed oo ka hadlay Xaaladda ka jira Itoobiya ‘Waa dambi weyn dilkii fanaan Hachalu‘
Addis Ababa (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed ayaa shacabka Itoobiya ugu baaqay in xasilooni ay muujinayaan isla markaana ciidammada ay kala shaqeeyaan sidii loo sugi lahaa amniga.
Abiy Axmed ayaa waxaa uu ku tilmaamay dilka fanaanka Hachalu Hundessa dambi weyn.
“Kuwo soo qorsheeyay dambigan kuma aysan faraxsaneyn isbeddallada haatan ka socda dalka, hadafkoodu kaliya ah ma aheyn inay dilaan walaalkeen Hachalu, balse wuxuu hadafkoodu ahaa inay dilaan Itoobiya” ayuu yiri RW Abiy Axmed.
Wuxuu kaloo yiri Abiy Axmed, “Waxay doonayeen inay kiciyaan shacabka markii ay dileen Hachalu, si ay u kiciyaan dareenka shacabka oo ay dhexdooda u dagaallamaan”
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya, ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabaddii lagu aasaayay fanaanka xilli halkaas ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dilka Hachalu.
Sidoo kale ra’iisul wasaaraha waxa uu ka dhawaajiyay in dowladdiisa ay qaadi doonto tallaabo kasta oo looga hortagayo rabshadaha haatan hareeyay dalkaas.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa hadalkiisa intaasi raaciyay, “Dadka cadawga ku ah isbaddallada haatan ka socda dalka waxay doonayaan inay wiiqaan awoodda dalka, si kastaba, dhaqdhaqaaqooda ma guuleysan doono”.
rabshadaha Addis Ababa